Wararka Maanta: Axad, July 29, 2018-Maalinta caalamiga ah ee cudurka Cagaar-showga oo Muqdisho laga xusay
Axad, July, 29, 2018 (HOL) – Munaasabad lagu xusayey Maalinta caalamiga ah ee ka hortaga iyo la dagaalanka cudurka dilaaga ah ee Cagaarshowga (World hepatits Day) oo sanad kasta bishan July laga xuso caalamka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Munasabadan oo ay soo qaban-qaabiyeen Ururka Ardayda dhaqaatiirta Soomaaliyeed (SOMSA), ayaa halku dhaga sanadkan uu yahay Ciribtirka Cudurka Cagaar-showga (Eliminate Hepatitis).
Mas’uuliyiin ka soctay Wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya, heyadda caafimaadka adduunka WHO Aqoonyahanno, boqolaal ka tirsan ardayda Jaamacadaha qaarkood, masuuliyiin kala duwan iyo xubno ka socday qey-baha bulshada.
Guddoomiyaha Ururka dhaqaatiirta ardayda Soomaaliyeed Dr C/llaahi Maxamuud Tuur-yare oo furitaankii munaasabadaas ka hadlay ayaa u mahad celiyey Prof. Dufle, ardayda ka faa’iideysatay casharkan iyo martida kala soo qeyb gashay intaba, wuxuuna xusay in ururka SOMSA uu mar walba qabto tababaro si kor loogu qaado aqoonta ardayda Soomaaliyeed ee ku howlan barashada Caafimaadka.
Yaasiin Nuur oo ah masuul ka tirsan WHO oo isna halkaas ka hadlay ayaa ka waramay muhimada ay leeyihiin barnaamijyada noocan ah ee bulshada looga wacyi gelinayo cudurada haliska, wuxuuna xusay in heyadda caafimaadka adduunka ay kaalinteeda ka qaadaneyso xoojinta barnaamijyada noocan ah.
Guddoomiyaha Jaamacadda Banaadir Dr. C/risaaq Axmed Dalmar oo isna munaasabadaas ka hadlay ayaa sheegay in dhaqaatiirta Soomaaliyeed uu waajib ka saaran yahay sidii ay bulshadooda uga wacyi gelin lahaayeen cudurada halista ah.
“Cagaarshowga waa cudur dilaa ah, Soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee lagu arko mar walba, waxaan u mahad celinayaa Prof. Dufle oo muddo fog soo waday wacyi gelinta cudurkan si weyna ugu dedaalay sidii bulshada loogu baraarujin lahaa ka hortagiisa” ayuu yiri Dr. Dalmar.
Prof. Cismaan Max’uud Dufle oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ahna oo munaasabadan ka hadlay ayaa sheegay in cudurkan uu faro ba’an ku hayo bulshooyinka caalamka, ayna sanad walba u dhintaan malaayiin qof oo intooda badan ku nool dalalka ka hooseeya saxaraha Afrika, Koonfur bari Aasiya iyo Latin Amerika, isagoo xusay in qorshuhu yahay cudurkan in laga ciribtiro aduunyada ugu dambeyn sanadka 2030-ka.
Cagaarshowga A ( Hepatitis A Virus – HAV) ayuu sheegay Prof. Dufle inuu yahay nooca ugu badan, uuna sanadkii ku dhaco tiro dhan 1.4 milyan oo ruux, isagoo xusay inuu ku badan yahay caruurta iyo dadka waaweyn, wuxuuna tilmaamay in cudurkan uu mararka qaarkood dadka ugu dhaco hab saf mareen ah.
Waxaa xusid mudan in Dr. Cawaale oo ka mid ahaa dufcadii ugu horeysay ee ka qelin jebisay kuliyadda Caafimaadka ee Jaamacada Banaadir uu munaasabada ku soo bandhigay Talaal loogu talo galay cudurka Cagaarshowga kaasoo markiiba la siiyey qaar ka mid ahaa ardaydii goob jooga aheyd qaarkood.
Mas’uuliyiinta goob jooga ka aheyd xuskan ayaa shahaadooyin uu bixiyey ururka SOMSA waxay guddoonsiiyeen ardayda ka faa’ideysatay dhegeysiga casharka ku saabsanaa Cagaarshowga waxayna munaasabadaas ku dhamaatay Sidii loogu talo galay.